Madaxweynaha Somaliya Oo Sheegay In La Baadhayo Weerarkii Hotel Saxafi | Saxil News Network
Madaxweynaha Somaliya Oo Sheegay In La Baadhayo Weerarkii Hotel Saxafi
November 2, 2015 - Written by admin
Muqdisho (SAXILNEWS)_Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cambaareeyey weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ka geysatay shalay huteelka Saxafi ee magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen inka badan 15 qof, tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen.
War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in hay’adaha amnigu baadhayaan sida uu u dhacay weerarkan, iyo sida sare loogu qaadi karo jawaabaha ay ciidamada dowladda ka bixiyaan marka uu dhaco weerar noocaan oo kale.
Waxaa uu sheegay madaxweynaha in weerarrada noocaan oo kale ah ay muujineyso naft la caarinimada kooxaha xagjira ah, isagoo intaas ku daray in ay marnaba niyad jabin doonin dowladda iyo shacabka waa sida uu hadalka u dhigee.
Madaxweynuhu wuxuu tacsi u diray qoysaska iyo asxaabta dadkii weerarka ku dhintay, wuxuuna caafimaad u rajeeyey kuwa ku dhaawacmay.
Weerarka waxaa sidoo kale cambaareeyey madaxda kale dowladda, kuwa maamul goboleedyada iyo beesha caalamka.